Waa maxay jacayl? | Abaalmarinta Abaalmarinta | Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Relationships Waa maxay jacayl?
Jacaylka, ha ahaado kuwa kale ama ha la jeclaado, waxay naga dhigeysaa inaan dareemo isku xirnaan, amni, dhameystiran, kobcin, kalsooni, deganaan, nolol, hal abuur, awood iyo gebi ahaanba. Waxay dhiirrigelisay gabayaaga, muusikiistayaasha, farshaxanada, qorayaasha iyo fiqiga muddo kumanaan sano ah. Laakiin waa maxay jacayl? Halkan waa wax lagu farxo fiidiyo muuqaal leh taasi waxay ina tusaysaa sida ay u egtahay ficil ahaan.
Waa awoodda ugu wayn ee niyadeed ee naga dhex leh. Waxa ka soo horjeeda waa cabsi, taas oo ka muuqata noocyo badan sida xanaaq, cadho, masayr, niyadjab, walaac iyo wixii la mid ah.
Si aad u hesho jacayl badan, waxay runtii ka caawineysaa in la ogaado rabitaanka galmada iyo jacaylka, marka la eego isku xirnaanshaha, waxaa soo saarey laba qaybood, laakiin nidaamyo isku xiran oo maskaxda ku xiran. Waxaan dareemeyn karnaa inaan isku darsanno saaxiib laakiin aanan rabin galmo isaga ama iyada. Waxaan rabnaa rabitaan jinsi ah qof aan lahayn dammaanad. Isku-dheelitirnaanta caafimaad ee labada rabitaan iyo isku-xidhnaantu waa saldhigga ugu wanaagsan ee xiriirka muddada dheer, farxad iyo galmo. Labaduba waa abaalmarin dabiici ah.
Abaalmarinta dabiiciga ah ama tan hoose waa cuntada, biyaha, jinsiga, xiriirka jacaylka iyo roonaanta. Waxay noo ogolaanayaan inaan badbaadno oo aan horumarno. Raadinta abaal-marinnadan waxaa keena rabitaan ama rabitaan cunto iyada oo loo marayo dopamine neurochemical. Abaalgudyada dabiiciga ah waxay ina siinayaan dareen farxad leh markay cunaan, cabbaan, soo bandhigaan, iyo in la kobciyo. Dareenka noocan oo kale ah wuxuu xoojinayaa dhaqanka si aan u dooneyno inaan ku celino. Xanuunka guud ahaan, gaar ahaan haddii uu sii dheeraado, na naga dhigo. Taasi waa sidaan u baran lahayn. Mid kasta oo ka mid ah dabeecadahan waxaa looga baahan yahay badbaadada noocyada.
Pornography waxay ka faa'iideysaa rabitaankeena rabitaanka galmada, gaar ahaan qaan-gaarnimada, iyada oo aan keenin taabashada iyo jacaylka. Isticmaalka badanaa lebbiska internetka muddo dheer ayaa keeni kara niyadjab iyo xataa qabatinka dadka qaarkood. Barashada sida loo jecel yahay si joogto ah ayaa muhiim u ah samaqabka muddada dheer.
Halkan waa tusaaleyaal degdeg ah oo sahlan oo lagu fahmayo shaqada nuucyada ugu weyn ee nuuc-nuglaha ah ee ina naga dhigaya jacayl. Xusuusnow dhunkashadaada kowaad?
Jacaylku Sida Isku Xidhka >>